2020-02-18 13:39:26 , #Accounting အပိုင်းနဲ့ အင်တာဗျ…
#Accounting အပိုင်းနဲ့ အင်တာဗျူးသွားဖြေကြမယ့် သူလေးတွေအတွက်
တီချယ်ရေ သမီးတော့ မနက်ဖြန် Jr Accountant နဲ့ အင်တာဗျူး သွားဖြေရမှာ ဘာတွေလေ့လာသွားရမလဲလို့ လာမေးကြလို့ ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ်အင်တာဗျူးသွားဖြေရင် လုပ်လေ့ရှိတဲ့အရာလေးတွေကို Sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာ ကိုယ်ဘာအတွက်ကြောင့်အလုပ်လုပ်ချင်တာလဲဆိုတာ သိဖို့ပါ။ ဟောအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ " အော် အလုပ်လုပ်မှတော့ ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ပြောချင်ပါပေါ့နော်"
1. ပိုက်ဆံ လိုချင်တာလား? လစာများရင်ပြီးကောလား? ဘာပဲလုပ်ရရ လုပ်မယ့်ဆိုတာမျိုးပေါ့
2. ပိုက်ဆံတော့လိုချင်တယ် ဒါပေမယ့် အဓိက ပညာရဖို့အတွက်ပဲဆိုတာမျိုးကိုပြောတာပါ။
OK ကိုက ပညာကိုအဓိက လိုချင်ရင်တော့ ကိုယ်လျောက်တော့မယ့်အလုပ်က အခုမှလုပ်ငန်းစတာမျိုး (သို့) အခုမှ စာရင်းတွေကို သေချာ စီစစ်ရတော့မယ့် လုပ်ငန်းမျိုးကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ တာဝန်ယူဖို့အပိုင်းတွေများလာမယ် တာဝန်ခံမှုတွေကော အကုန်လုပ်ရမယ့် Business မျိုးကို လက်ခံလိုက်ပြီး အလုပ်ဝင်ကြည့်ဖို့ပါပဲ။
#ကဲဟုတ်ပြီ အစပျိုးပြီးပြီဆိုတော့ အဓ်ိက ပြောချင်တာက
1.မိမိကိုအင်တာဗျူးစခေါ်ရင် အရင်ဆုံး ဘာလုပ်ငန်းလဲဆိုတာ စမေးပါ။
ဥပမာ- လုပ်ငန်းက Hospital ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါဆို။ ဒါကို ကိုသိသွားတာက Hospital နဲ့ပတ်သပ်ပြီး သူရဲ့ Operation လည်ပတ်ပုံကို အကျဉ်းချုပ် စဥ်းစားလို့ရသွားမယ်။
2. မိမိလုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေက ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ စဥ်းစားရပါမယ်။
ဟူတ်ပြီ စောစောက လုပ်ငန်းက Hospitalမှန်းသိသွားရင် ကိုယ့်လျောက်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Responsibility တွေကိုလဲ ဘာလုပ်ရနိုင်မလဲဆိုတာ တွေးမိလာပါလိမ့်မယ်။
#ဥပမာ-လူနာအဝင်အထွက် စာရင်းမှတ်ပေးရတာမျိုး (သို့) နိုင်ငံခြားက ဆေးဝါးတင်သွင်းလာတဲ့ဆေး Inventory တွေ ကိုlist လုပ်ပေးရတာမျိုး စသည့် စာရင်းပိုင်းဆက်သွယ်တာမျိုးတွေ တွေးမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
3. အဲ့ (2)ချက်ထဲနဲ့တင် မိမိ မျော်မှန်းလစာ ဘယ်လောက်တောင်းသင့်တယ်ဆိုတာလဲ စဥ်းစားတက်သွားပါလိမ့်မယ်။
4.အင်တာဗျူး သွားဖြေတဲ့အခါ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်သွားပါ အထူးသဖြင့် ခေါင်းလျော်သွားပါ၊ လက်သည်းညှပ်သွားပါ။ #လူမှာအဝတ်တောင်းမှာအကွပ်ဆိုတဲ့အတိုင်း အဝတ်အစားကို သက်သက်ရပ်ရပ် ဝတ်ဆင်ခြင်းက မိမိကိုယ့်ကို ယုံကြည်စိတ်ရှိစေပါတယ်။
5.အလုပ်ကို သေချာစဥ်းစားပါ အလုပ်နဲ့ဝေးလား.၊ နီးလားက အစ၊ ရေရှည်လုပ်နိုင်မယ် မလုပ်နိုင်ဘူးက အစ စဥ်းစားပြီးမှ လက်မခံပါ။.လစာတွေက တော့အများကြီးရနေလေရဲ့ အလုပ်ဆင်းရတာ အရမ်းဝေးလွန်းနေရင် ရေရှည်အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး ဒါကြောင့် ဒီအချက်ကိုပါထည့်စဥ်းစားပေးရပါမယ်။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အလုပ်လျောက်ခါနီး အင်တာဗျူးမသွင်းခင် ပြင်ဆင်သင့်တာလေးတွေကို #ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောပြသွားတာပါနော်။
အားလုံးပဲ မိမိဘဝလမ်းမှာ အခက်အခဲများကို တစ်ဆင့်ခြင်း တစ်ဆင့်ခြင်း အောင်မြင်အောင်လျောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
#Job_Training_For_Senior_Accountant နှင့် #LCCI အတန်းများစုံစမ်းလိုပါက??????
This entry was posted in Training and Class on 2020-02-18 by admin.
← 2020-02-12 14:23:47 , 2020 Internship Training … 2020-02-22 11:02:46 , ဒီတစ်ခေါက် ပြောချင်တဲ့အကြောင်း… →